Basikety – Mada U20 lehilahy : nanao pao-telo ny DTSC Analamanga | NewsMada
Basikety – Mada U20 lehilahy : nanao pao-telo ny DTSC Analamanga
Par Taratra sur 01/06/2018
Anisan’ny ekipa nisongadina sy nahavita dingana goavana ny DTSC Analamanga, nandritra ny fifaninanam-pirenena, ho an’ny sokajy zandriny U20 lehilahy, notanterahina tany Toamasina, ny 19 ka hatramin’ny 27 mey lasa teo. Tsy vitan’ny hoe nandrombaka ny maha tompondakan’i Madagasikara azy izy ireo fa mbola noraofiny avokoa ny amboara ho an’ireo mendrika sy nahavita be, tamin’izany fihaonana, izany.
Nanao pao-telo ny DTSC, tamin’ity. Voalohany, Raharimanantoanina Sitraka no voahosotra ho mpilalao namono baolina be indrindra. 95 ny isa azony, nandritra ny lalao rehetra nataony. Marihina fa anisan’ny mpilalao andrin’ny ekipam-pirenenaihany koa i Sitraka. Mbola mpilalaon’ny DTSC ihany koa ny nahazo ny amboaran’ny mpilalao mendrika, amin’ny alalan’Andriamanana Mickael, ary farany Razafindralambo Bayard, mpanazatra nisongadina sy niavaka.
Marihina fa notolorana amboara sy fanomezana avy any amin’ny orinasan-tserasera Telma ihany izy telo mirahalahy mianaka.
Dingana manaraka ho an’ny federasiona ny dingana voalohany amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, sokajy N1A. Fihaonana, hotanterahina any Mahajanga, manomboka ny 8 ka hatramin’ny 17 jona 2018. Ekipa 12 ny eo amin’ny vehivavy ary 14 kosa ny lehilahy hifaninana amin’izany.